London: Maxaa derbi jiif ka dhigay hooyadan iyo wiilkeedan Soomaalida ah? - BBC News Somali
Markii ugu horreysay ee aan arkay, waxay ila noqotay musiibo kale oo sababtay kororka dadka guryo la'aanta ah, kuwaa oo shacabka ay deyriyeen. Balse markasta oo wax badan aad ka sii ogaato, sheekada way sii adkaaneysaa.
Intii aan baritaanka waday, waxaan ogaaday dadka kursigan ku nool in ay yihiin hooyo iyo wiilkeeda oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya. Hooyadu waa 70 sano jir, wiilkana wuxuu ku jiraa da'da 30-meeyada in kastoo uu u muuqdo in uu ka weyn yahay.
Waxaa nasiibdarro ah in Golaha Deegaanka ay dadkan siiyeen dhowr guri. Dhammaan way diideen - xittaa iskuma aysan deyin in ay guri raadsadaan. In kursigan ay ku noolaadaan waxay u muuqataa in ay tahay nolol ay iyaga doorteen.
Kor meer uu sameeyay Maamulka Guud ee London iyo hay'adda St Mungo's, waxay ku ogaadeen in 3,289 oo qof ay seexdeen jidadka London ugu yaraan hal mar, muddadii u dhexeysay October iyo December ee sannadkii la soo dhaafay, Waa tiradii ugu badneyd tan iyo markii uu diiwaankan bilowday.
Bishii December ee 2014-kii, waxaa la dhigay cisbitaal ka dib markii uu qabow ku dhacay - intii ay cisbitaalka ku jireen, Golaha Deegaanka wuxuu meesha ka qaaday kursigii ay ku dul seexan jireen, iyagoo sheegay inuu yahay mid ay "dib ugu soo noqon doonaan".
Markii hooyada laga soo saaray cisbitaalka - wiilkeeda wuu ku sii jiray muddo dheer - Waxay toos u aaday kursigii, waxayna aragtay in meeshii uusan oolin.
Waa galab, maalin shaqo, sacadduna waxay ahayd 2:15pm. Hooyada iyo wiilkeeda waxay isku duubayaan bacda, si ay u nastaan. Bas waddada ciriiri ku noqotay ayaa dhinacooda taagan. Qof kasta oo qeybta hoose ee baska saaran wuu daawanayaan. Waad arki kartaa la yaabka ka muuqda wejiyada dadkaas: "Kaas ma hoy baa? Dadkan ma halkan bay si dhab ah ugu nool yihiin?"
Qoraaga: Hi, ma wacan tihiin? (way dhoolla caddeeyeen.) waxaan aamini la'ayahy in qabowga ba'an ay dhex fadhidaan. Habeenkii, sideed ugu adkeysataan?
Wiilka: Waa qabow. Mararka qaar waaba saa'id.
Wiilka: Kuuma sheegi karo... (Bas ayaa soo maray meesha, waana maqli waayay jawaabtiisa oo buuxda.)
Markii sheekada ay halkaas mareysay, hooyada waxay bilowday in ay qososho, wiilkeedana wuu dhoolla caddeeyay. Way isu gudbiyeen, waxay ahayd arrin aan macquul ahayn - aniguna waan qoslay.
Waxaan dhihi karaa, xaaladdooda ayaan la yabay, waana dareemi karaa in iyaguna ay la yaabeen su'aaleheyga, sida in jawaabohooda ay yihiin caadi, anigana aan diidanahay.
Waxaan u sheegay in xaaladdooda aan wax uga qorayo BBC-da. Wiilka wuxuu sheegay in uu garanayo BBC. Waxaan u sheegay in aan ka walwalsanahay in ay waddadan ku noolaadaan iyadoo qabowgan ba'an uu jiro.
Waxaan isku deyay in macluumaad badan aan u helo sida ay tahay nolosha kursiga, balse wiilka ma dooneyn in uu wax badan ka dhoho arrinta. "Maya, aad baan uga xumahay," ayuu yiri isagoo dhoolla caddeynaya. Waan weydiiyay in ay Soomaliya ka yimaadeen, wuxuuna iigu jawaabay 'haa. Wuxuu sheegay in muddo fog ka hor ay ka soo tageen Soomaaliya.
Waxaan ku kala tagnay isu dhoolla caddeyn iyo ereyo fiican, laakiin mid kasta uu ku wareersan yahay su'aalaha iyo jawaabaha.
Mid ka mid ah haweenka lala hadlay waxay tiri: "Aad baan ula murugooday arrintan. Wax kasta waan isku deynay - way diiday in ay dhageysato taladeena."
Nin dadkaas ka mid ahna wuxuu yiri: "Waa ceeb weyn. Haddii bulshada Soomaalida ay doonayaan in ay wax ka qabtaan, way xallin karaan."
Ninkii ila socday madaxa ayuu ruxay. Ma jiro wax badan oo bulshada Soomaalida ay sameyn karto, ayuu yiri. Wuxuu ka walaacsan yahay saameynta qaabka ay u nool yihiin ay ku yeelaneyso caafimaadka maskaxdooda. "Haddii aniga aan ahaan lahaa oo noloshan aan ku jiri lahaa, mar hore ayaan dhiman lahaa. Ma garanayo sida ay ku badbaadaan."
Waxaan weydiiyay, waxa la sameyn karo. Si degdeg ah ayuu u jawaabay wuxuuna yiri: ""Waxay ahayd in halkan laga raro si bini-aadamnimo ah. Dadka way xanuunsan yihiin runtii."
Maxay tahay sababta uu qof guri la'aan ah u diidayo in meel uu ku hoydo la siiyo?
Waxaa suuragal ah in wax yaabaha loo soo bandhigay "aysan buuxin karin bahidooda" ayey tiri Hannah Gousy, maamulaha arrimaha sharciga ee hay'adda Crisis.
Waxaa suuragal ah in ay noloshan dhibka ah ka doorbidayaan in guri ay la wadaagaan qof kale oo suuragal ay tahay in walwal ay ku abuurto. Waxaa dhici karta in aysan aaminsaneyn dadka kale ee guri la'anta ah iyo hay'adaha u sheegaya in ay caawinayaan.
Su'aal kale ayaa taagan oo ah, Hooyadan iyo wiilkeeda ma sharciga ayey jebinayaan? Qareenno ayaa ka jawaabay, waxa dhici kara haddii aan ku noolaado kursi waddada dhankeeda ku sameysan?
Gary Rycroft, oo ah sharci yaqaan ayaa yiri: Waa xadgudub haddii guri qof kale oo aan laguu fasixin ku noolaato." Balse kursi dadweynaha ka dhexeeya, ma loo arki karaa hanti uu qof kale leeyahay? "Markasta waxaa jiro qof leh dhulka. Haddii uu kursi dheer ku sameysto qof kale, waa in uu dareemo in dhulkaas uu xaq u leeyahay. Dhulka ka dhexeeya dadweynaha, wuxuu noqon karaa mid uu maamulka deegaanka leeyahay ama qeyb ka ah waddo dadweyne.
Xeerarka hoyga. Lataliyahooda sharciga wuxuu yiri ma ahan"dembi ama ku xadgudub sharci in aad alaabtaada iyo qoyskaada geyso beer dadweyne ama kursi ku dhex yaalla. Sidoo kale in ad teendho ka dhisato waddada dhinaceeda ma ahan dembi laga galay Golaha Deegaanka - Waxaa dhici karta in uu jiro sharci gudaha ah oo taas mamnuuci kara".
Hadda waan ogahay in aysan dooneyn in meeshooda laga kexeeyo, aysanna dhib ku ahayn sharciga. Waxaa jirto su'aal kale oo ah, Ma awoodaan in go'an iyaga u wanagsan ay gaaraan?
Golaha deegaanka ee Wandsworth warqad ay xoogaa ka dib soo direen waxay ku sheegeen in hooyada iyo wiilkeeda, "uu Goluhu siinayay meel ay degaan kuwaas oo la qalabeeyay, lana qurxiyay, oo ay ka mid tahay meeshii ay degganaan jireen, way diideen dhammaan xitaa iyagoo aan soo arag."
"Dhowaan waxaan haynay guri iyaga loo diyaariyay, inagoo adeegsanayna kooxda arrimaha bulshada, waxaan isku deynay in aan ka dhaadhicino si ay u aqbalaan".
Markii Golaha deegaanka uu meesha ka qaaday kursigii ay degganaayeen 2014-kii, waxay sheegeen in iyaga dartood ay u sameeyeen. Balse hadda waxay ogaadeen in midda ay doonayaan ay tahay in faraha looga qaado sida ay u nool yihiin. Waa xushmeynta go'aankooda.
Bal ka waran adoo derbi jiif ah haddii lacag badan lagu siiyo?
12 Nofembar 2018